15 / 05 / 2021 03 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 1093 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts နာရီမျှော်စင်, ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမ, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း, Albus Dumbledore, လျှို့ဝှက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, Colin Creevey, Gilderoy Lockhart, Ginny Weasley, Gryffindor, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, Hogwarts, ဟတ်ဖ်, Justin Finch-Fletchley, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Luna ချစ်စရာကောင်းတဲ့, Headless Nick နီးပါး, ပါမောက္ခ Sinistra, Ravenclaw, reviews, အဆိုပါ LEGO Group, တွမ်ပုစ္ဆာ, Voldemort
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည်နောက်ဆုံး၌အဓိကကျသည် ဟယ်ရီပေါ်တာ တည်နေရာ ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း - သို့သော် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်တစ် ဦး တည်းအမြင်ဖြင့်ခိုင်မာစွာဖြင့်၎င်းသည်အဓိကအကြောင်းအရာ၏လတ်တလောအမွေနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိနိုင်ပါသလား။
ပထမတစ်ချက်မှာဒီနွေရာသီဟာထူးဆန်းတဲ့ပြောင်းရွှေ့မှုတစ်ခုလိုပဲ ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံလိုက်များသည်ကြီးမားသော Hogw ပေါ်ရှိကြီးမားသောပြန်လည်တည်ဆောက်မှုခလုတ်ကိုထိရောက်စွာတွန်းအားပေးသည်artငါတို့အားလုံးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည် Lego Group သည် wizarding ကျောင်းသို့၎င်း၏ modular ချဉ်းကပ်မှုအသစ်ကိုယူပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပထမဆုံးလှိုင်း၏နှစ် ၂၀ မြောက်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ 2001 ကနေအစုံ
ဒါကငါတို့လိုဒူးခေါင်းထဲကလူတွေအတွက်မကောင်းတဲ့သတင်းပဲ ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမ နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts နာရီမျှော်စင်, Hogw ၏သုံးartဒီနွေရာသီရဲ့လှိုင်းလုံးကိုဖြတ်ပြီးအတူတကွပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ s စုံတွေဟာ wizarding world ကိုလက်ခံကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကဖိအားတွေအများကြီးထားတယ် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း အောင်မြင်ဖို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Basilisk ရဲ့အိမ်ကိုကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ဒီခေတ်သစ်ယူတာကမအောင်မြင်ရင်ဒီနွေရာသီအစုံလှိုင်းလုံးတွေကိုအလွယ်တကူဖြတ်သန်းသွားနိုင်လိမ့်မယ် ...
theme: ဟယ်ရီပေါ်တာ အမည်သတ်မှတ်မည် - ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 129.99 / $ 129.99 / € 139.99 အပိုင်းပိုင်း: 1,176 အသေးစားပုံများ: 11
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နောက်ဆုံးပေါ် Hogw အသုတ်အနေဖြင့်သင်မှာထွက်ခုန်သောပထမ ဦး ဆုံးအရာart(ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာပြီဖြစ်သောဗေဒဆိုင်ရာသဲအစိမ်းရောင်ခေါင်မိုးများထက်ကျော်လွန်သော) ပစ္စည်းများသည်၎င်းတို့မည်မျှတင်းကျပ်ပြီးအကုန်အကျများသနည်း။ ၎င်းသည်အလွန်တမင်တကာဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ခွင့်ပြုသည့်အတိအကျဖြစ်သည် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း နှစ် ဦး စလုံးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ရန် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ ပိုမိုကျယ်ပြန် Hogw ၌တည်၏arts ပြသခြင်း။
သို့သော်၎င်းအစုံသည်ပေါင်းစပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ် Hogwarts မော်ဒယ်များရိုးရှင်းစွာဘေးချင်းယှဉ်-ထိုင်, ထိုင်နှင့်အတူပူးပေါင်းအကြောင်းအရာခဲ့ကြသည် နည်းပညာ pins များနှင့်၎င်းသည် p အပေါ်တော်တော်အန္တရာယ်များသောလှုပ်ရှားမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်art ဒီဇိုင်းအသင်း၏။ နောက်ဆုံးတွင်ခက်ခဲသောရှုထောင့်များပတ် ၀ န်းကျင်တည်ဆောက်ခြင်းသည်ထပ်ခါတလဲလဲကြုံတွေ့ရသော၊
ကျေးဇူးတင်စရာ, ထိုမှာအားလုံးဖြစ်ပျက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်ဟာအခြေခံအားဖြင့် stackable box တွေကိုတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပေမယ့်သူတို့နဲ့အတွင်းမှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာတော့ဘယ်တော့မှပျင်းစရာမကောင်းပါဘူး။ Modular Buildings Collection လိုပဲဒီအဆင့်တွေကိုထိပ်ဆုံးနဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ထားတာကတကယ်ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။
ဒါဟာအမှန်တကယ် comp ရှိမဆိုလိုပါartစိတ် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်းတည်ဆောက်ခြင်းသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဆောက်လုပ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုရန်လမ်းညွှန်လက်စွဲစာအုပ်များစွာမှများစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။ ဖြစ်သကဲ့သို့, ကအနည်းဆုံးတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်သဘာဝချိုးဖောက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ - ရေတွက်အိတ်ထက်ပို။ ပင်။
modular ၎င်း၏အသစ်ချဉ်းကပ်မှုအပြင်အခြားအဓိက departရတယ် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း အဆိုပါ Hogw ကနေartမတိုင်မီလာကြပြီ s ကိုရည်ရွယ်ချက်ပြန်မှခေါ်သော၎င်း၏ဗေဒ၌တည်ရှိ၏ classic ဟယ်ရီပေါ်တာ 2001 နှင့် 2002 ကနေလိုင်း -Up ။
ထိုလှိုင်းတံပိုးများသည်ကြီးမားသောကျယ်ပြန့်သော Hogw သို့ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်arts display - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေ့တာကိုထပ်မံရောက်ရှိနိုင်သည် Lego Group သည် ၂၀၂၂ မှ၎င်း၏ယခင်ပုံစံသို့ပြန်ပြောင်းသွားသည် (သို့) ဤပုံစံနှင့်ပင်တွဲဖက်ထားသည် - သို့သော်ယနေ့ခေတ်စုံ၏အသေးစိတ်နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ။
၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း 2001 ရဲ့ 4709 Hogw အကြားတစ်နေရာရာလိုင်း straddlesartရဲတိုက်နှင့် 2018 ရဲ့ ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမသိသာယခင်ထက်အဆုံးစွန်ဖို့အများကြီးပိုမိုနီးကပ်စွာကျူလုံးသည်မှီသော်လည်း။ (ခေါင်မိုးတစ်ခုသည်အုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည်။ )
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခြင်းမှမျှော်လင့်ထားသည့်အပြင်ဘက်အသေးစိတ်ကိုဆိုလိုသည် ဟယ်ရီပေါ်တာ လိုင်းသည်ဤနေရာတွင်လည်းကောင်း၊city နှင့်ထိုမကြာသေးမီအစုံ၏အတိုင်းအတာ - ငါတို့ p အဖြစ်အခြားနောက်ထပ်ဂရိတ်ခန်းမရart of ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်းဥပမာအားဖြင့် ၇၅၉၅၄ တွင်ပြaနာမရှိချေ။
ထိုအစားသဲစိမ်းလန်းသောခေါင်မိုးများနှင့်အခြေစိုက်စခန်းအများစုပါဝင်သော Big၊ Ugly Rock Pieces (သို့မဟုတ် BURPs) တွင်တွေ့ရမည့်တကယ့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုသူတို့မည်သို့ကျင်းပကြသည်။ classic ဒီဇိုင်းများ - ဒါပေမယ့်သင်ကအရမ်း p ရှိမယ်ဆိုရင်အဲဒါကမင်းအတွက်တကယ်ပဲအရေးပါတယ်artသင်မူရင်းနှင့်အတူကစားလျှင်ပြောရမညျသော icular အသက် ဟယ်ရီပေါ်တာ ဆိအဖြစ်အစုံ။
သင်မလုပ်ခဲ့လျှင်, ၏ဂုဏ်အသရေ ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း အများအားဖြင့်အတွင်းပိုင်းအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၀ ဒီဂရီလှန်လိုက်ပါ။ သင်ခေတ်သစ် Hogw နှင့်အဆင်ပြေစွာနေထိုင်နိုင်သောအတွင်းပိုင်းတစ်ခုနှင့်တွေ့လိမ့်မည်arts ကရရှိနိုင်အာကာသအတွင်းအစုံ။
အဆိုပါမော်ဒယ်များ၏ထူးခြားချက် - ဖယောင်းတိုင်အသစ်မှအလံများ၊ ကပ်ထားသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဖားများ (ဖားများစွာ) သည် - ထောင့်တိုင်းအမှိုက်သရိုက်များ၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောမဟာခန်းမဖြစ်သောကာကွယ်ရေးအမှောင်ထုကို ဖြတ်၍ ရရှိနိုင်သည့်အခက်အခဲများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ Arts ကိုစာသင်ခန်း, Gilderoy Lockhartရုံး, နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း။
ထိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အမှားအယွင်းတစ်ခုနီးပါးဖြစ်သော်လည်း၊ ထိုအခန်းများကိုအက္ခရာစာလုံးများများပြားစွာထားရှိသော်လည်း (နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးကြမည့်အတိုင်း) သင်ကပြဇာတ်အများစု၏အောက်ခြေတစ်ဝက်တွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ တကယ်တော့မော်ဒယ်ကိုယ်နှိုက်ကန့်သတ်ထက်ကျော်လွန်။ ဖြစ်ပျက်
အဆိုပါ box art အလွန်သေးငယ်သောအရိပ်အမြွက်လေးများဖြင့်ရဲတိုက်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိသည်။ သို့သော်လျှို့ဝှက်ချက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အခန်းအများစုမှာတည်ဆောက်ထားသောရုပ်ထုမှတစ်ဆင့် Basilisk ၏ဝင်ပေါက်ကိုအပ်နှံထားသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအများစုနှင့်အတူဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဆပ်ပြာဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားသည့်သပ်ရပ်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းနှင့်၎င်းနှစ်ဖက်စလုံးမှမြွေရုပ်ထုများအကြား၊ သင်ကပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကစားကွင်းကိုလိုချင်သည်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ၄၇၃၀ The Chamber of Secrets ။
၎င်းသည်အခန်းထဲတွင်သီးသန့်သီးခြားရပ်တည်ရန်လိုအပ်သော်လည်းထို့ကြောင့်မကြာသေးမီက Hogw တွင်ထည့်သွင်းရန်အလွန်ခဲယဉ်းပေလိမ့်မည်။arts ကိုအီးတစ်တန်မလိုအပ်သည့်လမ်းအတွက်သတ်မှတ်xtra BURPs, ပလက်ဖောင်းများနှင့်မီးခိုးရောင်အုတ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုသင်တွေ့နိုင်တယ် Lego ပြီးခဲ့သည့်အနှစ် ၂၀ နီးပါးခန့်တွင်ပေါင် ၁၃၀ နှင့်အငယ်စားကုန်သည်ကြီးများအသင်းသည်ယခုထိတိုင်စိတ်ပျက်စရာမကောင်းပါ။ ထိုသဘောမျိုးဖြင့်၎င်းသည် modular ချဉ်းကပ်မှုအသစ်ကျသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် Lego အုပ်စုသည်အခြားနေရာတွင်ဤတည်နေရာနှင့်လုပ်နိုင်သည်။
ဒါကတကယ့်ကိုစိတ်သက်သာစရာပဲ is ထိပ်တန်းရှိ: တည်ဆောက်နိုင်သောရုပ်တု၌များများရှိသည် Lego မျက်စိအတွက်စတစ်ကာနှစ်ချောင်းလိုတယ်၊ ကျောက်မြွေများဖုံးလွှမ်းနေသောမြို့ပတ်ရထားဝင်ပေါက်ရုပ်ရှင်မှစစ်မှန်ခံစားရ; ဒါက Basilisk နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အများကြီးပိုကောင်းတယ် ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမသေးသေးလေးသေးသေးလေးတောင်မှပေါ့။
ဒီအရွယ်အစားအစုတခုကိုက်ညီရန် minifigure ရွေးချယ်ရေးပညတ်တော်မူ၏နှင့်ထို dep ၌artment၊ ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း ကျိန်းသေကယ်တင် - ပြီးတော့အချို့။ အခန်းပေါင်းများစွာကိုဖြည့်ရန်အတွက် ၁၀ လုံး (Goldemort) အက္ခရာ ၁၀ လုံးပါ ၀ င်သည်။ (ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းတို့သည်အခန်းထဲတွင်နေရာချရန်အခက်အခဲရှိသော်လည်း) သူတို့သည်အကုန်လုံးကိုသိသာထင်ရှားမှုမှမထင်ရှားသောအရာသို့လည်ပတ်သည်သာမကတစ်လုံး မှလွဲ၍ အားလုံးပါဝင်သည်။ Hogwartအိမ်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ကျောင်းသားလူ ဦး ရေကိုဖြည့်ဆည်းရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Gryffindor နှင့် Hufflepuff ကိုကိုယ်စားပြုသော Colin Creevey နှင့် Justin Finch-Fletchley တို့မှပထမဆုံးသောအသေးစားဓာတ်ပုံများဖြစ်သည်။ အခြား Ravenclaw သည်အခြား Luna (Cho လိုမဟုတ်ပါ) သည်အခြား Luna ထက် ပို၍ ကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ ဤသည်မှောင်မိုက်နေသည့်အရောင်တောက်နေလျှင်ပင်အခြား Nearly Headless Nick အစားသရဲအသစ်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်မူကား၎င်းတို့အားလုံးကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ။
၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း ထို့အပြင်စျေးကြီးသောပစ္စည်းများ (Gilderoy Lockh) တွင်ရှိခြင်းကြောင့်ယခင်ကလာရန်ခက်ခဲခဲ့သောဇာတ်ကောင်များကိုစုစည်းပေးသည့်အတွက်လည်းချီးမွမ်းထိုက်သည်art) သို့မဟုတ်ကျပန်းစာအုပ်များ (Tom Riddle) ။ နောက်ထပ်တောက်ပသော Dumbledore မူကွဲတစ်ခုနှင့်ပါမောက္ခ Sinistra ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဖြတ်တောက်ပါ။ သင်သည်ပြီးပြည့်စုံသောသေးငယ်သောအသေးစားရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့အား Cornish Pixies စစ်မှန်စွာစုံလင်သော ...
၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း Hogw ၏စျေးအကြီးဆုံး minifigure စကေးအပိုင်းဖြစ်သည်artWizarding World ၏အခင်းအကျင်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာချိန် မှစ၍ ယနေ့အထိရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်အကြိုက်များထက်များစွာ ပို၍ သိသာထင်ရှားသည့်ခံစားမှုအစုတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေသည်။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်.
ဒါ p ပါart၎င်းသည်အလျားလိုက်ရော၊ ဒေါင်လိုက်ပါကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်တိုးချဲ့ခြင်းကိုအကျိုးပြုသည့် boxy modular ချဉ်းကပ်မှုကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု။ အဆုံးရလဒ်သည်ယခင် Hogw ကဲ့သို့အသေးစိတ်သို့မဟုတ်အတိုင်းအတာကိုမျှဝေမည်မဟုတ်ပါartဒါပေမယ့်ဒီနှစ် Potter က ၂၀၀၁ ရဲ့စုစည်းထားပုံတွေကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြင်းခုံဖို့ခက်တယ်။
၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း Collectible Wizard ကဒ်ခြောက်ခုပါ ၀ င်သည်။
ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်းအဆိုပါ wizard ကိုကျောင်းမှချဉ်းကပ်မှုအသစ်။ ရဲတိုက်၏အခန်းများကိုရွေ့လျားခြင်းနှင့်ပြန်လည်စီစဉ်ခြင်း (ဤလှိုင်းတွင်သေးငယ်သောအရာနှစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်း) သည်ကျေနပ်စရာကောင်းပြီးအသေးစိတ်သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောကုန်ကျစရိတ်များကိုမရရှိနိုင်ပါ။
သို့သော်၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာသည်လျှို့ဝှက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကိုအမှန်တကယ်တရားမျှတစွာစီရင်နိုင်သည်။ Minifigures ကိုထည့်သွင်းခြင်းအပြင် (သင်ထည့်လိုက်သောအခါ၌သာဖြစ်နိုင်သည်) ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု) နှင့်ကျောက်ရုပ်ရုပ်တု၏ခံတွင်းမှတဆင့် Basilisk လျှော, အားလုံးလုပ်ဆောင်ချက်တကယ်မော်ဒယ်သူ့ဟာသူကပ်လျက်ဖြစ်ပျက်။
ဒါပေမယ့်ဒါကငါတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောဝေဖန်မှု - တကယ်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုရင် - သင်ဟာမြေဖြူတွေသုံးနေတုန်းပဲ ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း အောင်မြင်မှုတစ်ခုအဖြစ်တက်။ ၎င်းသည်ရုပ်ရှင် (အတွင်းပိုင်းအသေးစိတ်မှတဆင့်) နှင့် ၂၀၀၁ (မူရင်းအရောင်၊ ပြင်ပဗေဒနှင့် modularity တို့ဖြင့်) ၏ကျက်သရေကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းခံစားနိုင်ပြီးထိုသဘောအရနှစ် ၂၀ ပြည့်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အဖြစ်ခံစားနိုင်သည်။
LEGO Harry Potter ၇၆၃၈၉ Hogw တည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်းarts လျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်းလား
စုဝေးအကြမ်းဖျင်းသုံးနာရီဖြုန်းဖို့မျှော်လင့်ထား ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း။ ယင်းတို့ထဲမှအချို့သည်စတစ်ကာများသုံးခြင်းအတွက်အကုန်အကျခံမည်ဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်အရာကမျှခက်ခဲမည်မဟုတ်ပါ။
LEGO Harry Potter 76389 Hogw တွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသနည်းarts လျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်းလား
၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း အပိုင်း ၁,၁၁၆ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းအနက်မှောင်မိုက်သောဒြပ်ထုများတွင်အလင်းရောင်တောက်ပသောလက်တဆုပ်စာရှိသည်။
LEGO Harry Potter 76389 Hogw သည်မည်မျှကြီးသနည်းarts လျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်းလား
အားလုံးအခန်းပေါင်းအတူတူ clipped, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း အရပ်ရှည်ရှည်နှင့်ကျယ်ပြန့်သည် 40cm တိုင်းတာခြင်းတိုင်းတာခြင်းနှင့် 11cm နက်ရှိုင်းမှာလာပါတယ်။ ဒါကမင်းလမ်းမart တိုးချဲ့မှုအစုံမှအခန်းများအပေါ်ဖြည့်စွက် ...
LEGO Harry Potter 76389 Hogw သည်မည်မျှကုန်ကျသနည်းartကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ကုန်ကျစရိတ်?
၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း စျေးအကြီးဆုံး Hogw ဖြစ်ပါတယ်artယူကေတွင်ပေါင် ၁၂၉.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၂၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၁၃၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
← LEGO NINJAGO Reimagined နှင့်အတူဂီတစွန့်စားမှုတစ်ခုကိုစတင်ပါ
LEGO Harry Potter စုဆောင်းနိုင်သော Wizard ကဒ်များစာရင်း →